Ny maha-zava-dehibe ny mpisolovava momba ny fitsarana sivily | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ny mpisolovava momba ny fitsarana sivily dia manana fahaiza-manao lehibe amin'ny karazana olana sivily sy heloka bevava. Noho izany, ahoana no hahitanao mpisolovava mahay? Zava-dehibe ny fisafidianana mpisolovava mahafeno fepetra handresy ny raharahanao, na meloka ianao na tsy manan-tsiny. Na dia maro aza ny fitoriana voalamina ivelan'ny fitsarana, dia tokony ho vonona hisolo tena anao eny amin'ny fitsarana ny mpisolovava anao raha ilaina izany. Mila mampiasa mpisolovava momba ny raharaham-pitsarana eo anilanao ianao raha te hampihena na mety hanafoana ny mety ho sandan'ny voampanga.
Inona no atao hoe Litigation sivily?
Ny fitsarana sivily dia tsy fifanarahana ara-dalàna eo amin'ny antoko roa na maromaro mitady onitra amin'ny vola. Ny mpisolovava na mpisolovava iray dia manam-pahaizana manokana amin'ny fitsarana sivily. Ny mpisolovava momba ny fitsarana sivily dia manao fitsarana sivily mba hisolo tena ny voampanga amin'ny fitsarana, fitsarana, fitsaram-bahoaka ary fanelanelanana eo anatrehan'ny sampan-draharaham-panjakana, tribonaly vahiny, ary fitsarana federaly, fanjakana ary eo an-toerana.
Ny fitsarana dia momba ny raharaha ara-dalàna mifandraika amin'ny fizotran'ny fitsarana, ao anatin'izany ny tsy fitovian-kevitra, ny adihevitra, na ny fifandirana eo amin'ny olona.
Ny fizotran'ny litika dia:
fitadiavana sy fomba fanaovan-javatra
fitsarana, fitsarana ary loka
Satria mety haharitra taona maro vao vita ireo dingana ireo, dia mila ny fanampian'ny mpisolovava ara-pitsarana sivily mahay sy manana traikefa ianao. Ataovy azo antoka fa manam-pahaizana manokana amin'ny toe-draharaham-pitsarana ny mpisolovava anao mba hahafahany miaro ny raharahanao sy manampy anao hamaha ny olanao haingana araka izay tratra.
Mpisolovava am-perinasa sivily
Mpisolovava sivily iray no mamaha ny disadisa eo amin'ny roa tonta. Ny lalàna momba ny fitsarana dia fitsipika miaro ny tombontsoan'ny fiarahamonina sy ny vahoaka. Raha miatrika olana ara-dalàna ianao ary mieritreritra ny hametraka fitoriana, dia tokony hikaroka ny tolotr'ireo mpisolovava momba ny fitsarana sivily ianao, satria mpanolotsaina ara-dalàna izy ireo izay mamaly ny olan'ny lalàna ho an'ny daholobe na tsy miankina amin'ny alàlan'ny fitsarana.
Fanombanana sy fanadihadiana ny raharaha voalohany
Amin'ny raharahan'ny mpitory, matetika ny mpisolovava amin'ny fitsarana no manao fanadihadiana voalohany mba hanombanana raha misy porofo ampy hametrahana fitoriana. Amin'ny raharahan'ny voampanga, izy no hamaritra izay porofo azo hiarovana ny mpanjifany amin'ny fitakiana ho avy na ankehitriny.
Ny fitadiavana vavolombelona, ​​ny fakana vavolombelona, ​​ny fahazoana antontan-taratasy, ny fakana am-bavany ny mpanjifa, ary ny fandinihana ny zava-nitranga nahatonga ny tsy fitovian-kevitra dia tafiditra ao anatin'ny dingan'ny fanadihadiana. Ny mpisolovava amin'ny fitsarana dia mandray anjara matetika amin'ny resaka famahana ny raharaha alohan'ny fitsarana amin'ny fikasana hamaha ny toe-javatra alohan'ny hametrahana fitoriana.
Famoronana antontan-taratasy ara-dalàna
Amin'ny tranga iray, na ny mpitory na ny voampanga dia tsy maintsy mametraka fitarainana sy fihetsiketsehana maromaro any amin'ny fitsarana.
Hanombohana ny hetsika, ny mpisolovava mpitory dia hamorona sy hametraka fiantsoana sy fitarainana, ary ny mpisolovava mpiaro dia mamolavola valiny ary, amin'ny tranga sasany, fanoherana ho valin'io fitarainana voalohany io. Mba hamoronana ireo valiny ireo, ny mpisolovava mpiaro dia miara-miasa amin'ireo mpanjifany mba hanadihady ny fiampangan'ny fitoriana.
Ny hetsi-panoherana alohan'ny fitsarana dia mety hovolavolain'ny mpanolotsaina momba ny fitsarana ihany koa, toy ny fihetsiketsehana mitokona na manilika ny porofo na manova ny toerana na ny toerana hanaovana ny fitsarana. Azon'izy ireo atao ny mametraka fangatahana didim-pitsarana mifototra amin'ny fiangaviana, tsy mila fanatrehana fitsarana.
Ny dingana fitadiavana ny fitsarana dia mitaky ny fifanakalozam-baovao rehetra mifandraika amin'izany. Mba hahazoana izany vaovao izany, ny mpisolovava amin'ny fitsarana dia mampiasa teknika fikarohana maromaro.
Ny fanadihadiana dia iray amin'ireo fomba fiasa ireo. Fanontaniana an-tsoratra izay tsy maintsy valian'ny ankilany amin'ny hetsika izy ireo — an-tsoratra ihany koa ary eo ambanin'ny sazy mianiana. Mety ho tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana fanontaniana, izay mitaky fanontaniana am-bava apetraky ny mpanolotsaina mpanohitra ao amin'ny birao iray ary valiana amin'ny fianianana indray.
Fangatahana antontan-taratasy eo am-pelatanan'ny mpanohitra, ary koa ny fangatahana fidirana — mangataka ny mpanohitra mba hanaiky na handà ny ampahany manokana amin'ilay raharaha an-tsoratra sy amin'ny fianianana — dia fomba malaza hitadiavana ihany koa.
Ny porofo ara-batana dia mety hodinihin'ny mpisolovavan'ny fitsarana, ary koa ny fampahalalana voaray amin'ny alàlan'ny e-discovery, izay azo angonina, karakaraina ary nodinihina. Na izany aza, amin'ny ankamaroan'ny fotoana dia miantehitra amin'ny manam-pahaizana manokana izy ireo hanaterana ireo serivisy ireo. Ny manam-pahaizana dia manome tatitra an-tsoratra izay azo ampiasaina eny amin'ny fitsarana, na azo antsoina hijoro vavolombelona.
Ny mpisolovava amin'ny fitsarana ihany koa dia mamolavola sy miaro ny hetsika mifandraika amin'ny fikarohana, toy ny hetsika hanerena ny ankilany hamaly ny fangatahana fikarohana raha tsy nanao izany tao anatin'ny fe-potoana voafaritra. Ireo fomba fikarohana ireo dia manampy ireo mpitory amin'ny fanangonana fitaovana manan-danja, hamantarana ireo olana ary hamolavola paikady momba ny raharaha.
Mitadiava mpisolovava momba ny fitsarana sivily marina
Rehefa misy olona miampanga olon-kafa ho nanao ratsy taminy, ary avy eo dia nangataka ny fitsarana mba hahazoany onitra, dia antsoina hoe “lalàna sivily” izany. Amin'ny lalàna sivily, ny fanafoanana omen'ny fitsarana dia matetika ara-bola, ka ny fitsarana dia mandidy ny olona toriana mba handoa vola ara-drariny ho an'ilay olona nitory azy mba hanonerana ny fahavoazana.
Ny lalàna sivily dia mizara ho sokajy maromaro. Ankoatra ny ankamaroan'ny fitoriana sivily izay mandidy ny fanomezana vola natao hanonerana ny niharam-boina noho ny fanimbana mivantana an'ilay olona, ​​ny fitsarana indraindray dia mametraka onitra sazy. Ny tena ratra nahazo ny niharam-boina dia tsy ampy mba hamaritana raha tokony homena onitra fanasaziana. Ny fitsarana, etsy ankilany, dia handinika fotsiny ny toetry ny fihetsiky ny voampanga. Tsy matetika no omena onitra manasazy.